“अब अरु कसैको ‘पर्फेक्ट’ श्रीमती बन्न नसक्ने” खुलासा गरेकी दिपा र दिपक “डिपलभ”मा भएको खुलासा – ZoomNP
“अब अरु कसैको ‘पर्फेक्ट’ श्रीमती बन्न नसक्ने” खुलासा गरेकी दिपा र दिपक “डिपलभ”मा भएको खुलासा प्रकाशित मिति: आइतवार, पौष ०३, २०७३ समय - १:३३:०४ कलाकार दीपकराज गिरी र दीपाश्री निरौलाबीच २३ वर्षदेखि मित्रता कायम छ। दीपा नाट्यकर्मी, आरजे, हास्यअभिनेत्री हुँदै निर्देशक बनेकी छिन्। दीपाले निर्देशन गरेको ‘छक्का पन्जा’ चलचित्रले प्रदर्शनीको सयौँ दिन पूरा गरेको छ। दीपकराज नाट्यकर्मी, आरजे, हास्यअभिनेता हुँदै निर्माता बनेका छन्।
साढे दुई दशकदेखिको उनीहरूको सम्बन्ध फेरिएको छैन। ‘रिल लाइफ’ मा मात्र होइन, ‘रियल लाइफ’मा पनि उनीहरू धेरै निकट छन्। अझ भनौँ, पर्दामा देखिएजस्तै साँच्चै दीपकराज–दीपा श्रीमान्–श्रीमती नै हुन् कि भन्ने धेरैमा भ्रम देखिन्छ। उनीहरू एक–अर्कालाई केयर गर्छन्, सम्मान गर्छन् र माया पनि गर्छन्। उनीहरू मान्दैनन् कि माया सिर्फ विवाहका लागि गरिन्छ। दुवैको स्पष्ट धारणा छ, ‘विवाहभन्दा माथि पनि सम्बन्ध हुन्छ। हो, हामीबीच त्यही सम्बन्ध छ।’ अर्थात् उनीहरूबीच ‘डिप लभ’ छ। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिएका हौ।
दीपाश्रीमा हिरोइन र दीपकराजमा हिरो बन्ने चाहना झन्झन् उत्कर्षमा पुग्दै थियो। ०५२ सालको एक दिन दीपकराजले दीपाश्रीलाई एउटा प्रस्ताव राखे, ‘मैले रामविलास र धनियाँको कार्यक्रमको तयारी गरेकोे छु, तिमीजस्तै क्यारेक्टर खोजिरहेको थिएँ। तिमी धनियाँ बनिदिनुपर्‍यो।’ दीपाले भनिन्, ‘त्यस्तो क्यारेक्टर गर्न मैले कहाँ सक्छु र ?’ तर, दीपकराजले कन्भिन्स गराइछाडे र उनीहरूले सुरु गरे, रेडियो नेपालमा अर्को नाटक रामविलास–धनियाँ।
नाटकमा दीपकराज गरिब हुन्थे भने दीपा असाध्यै धनाढ्य। उनीहरू प्रेमी–प्रेमिका थिए। रामविलासले गरिब भएका कारण धनियाँलाई बिहे गर्न सकेका हुँदैनथे। धनियाँको बुबाआमाले धेरै सम्पत्ति भएको केटा खोज्थे। रामविलास भन्थ्यो, ‘म पैसा कमाएर ठूलो घर बनाएपछि बिहे गर्छु है।’ धनियाँले भन्थिन्, ‘छिटो बिहे गर्नुप¥यो। यत्रो नाटक गरिएको छ, रेडियोमा काम गरिरहेका छौँ। अब त पुगेन र ?’ नाटकको स्क्रिप्ट दीपकराज लेख्थे। त्यो कार्यक्रम रेडियो नेपालकै सबैभन्दा चर्चित थियो।
‘स्रोताहरूले हामीलाई साँच्चिकै प्रेमी–प्रेमिका ठान्दा रहेछन्,’ दीपाश्रीको अनुहारमा आश्चर्यको भाव झल्कन्छ, ‘बोराका बोरा चिठी आउँथे। तीन–चार घन्टा लगाएर चिठी छान्थ्यौँ। र, उत्कृष्टलाई वाचन गथ्र्यौं। मलाई त चिठी फाल्न पनि माया लाग्थ्यो।’ पछि त उनीहरूलाई कार्यक्रमको स्क्रिप्ट नै आवश्यक परेन। उनीहरू नाटकमा साँच्चिकै प्रेमी–प्रेमिका हुन्थे। प्रेममै डुब्थे। जुन अभिनय श्रोताले निकै मन पराएका थिए। त्यो कार्यक्रमले उनीहरूलाई थप नजिक्यायो। दीपाश्रीले दीपकराजजीबाट दीपकराज भन्न थालिन्। दीपकराज भने दीपाजी नै भनी सम्बोधन गर्थे।
बिस्तारै दीपाश्री दीपकराजप्रति आकर्षित हुन थालिन्। दीपकराजले पनि दीपालाई निकै केयर गर्न थाले। नारीप्रतिको सम्मान देखेर दीपाश्री उनीप्रति नतमस्तक नै थिइन्। त्योभन्दा बढी दीपकराजको लेखन कला र ‘कन्भिन्सिङ पावर’प्रति बढी प्रभावित थिइन् दीपाश्री। ‘उसको केयर गर्ने शैली अर्कै प्रकारको थियो,’ दीपाश्री भन्छिन्। दीपाश्री र दीपकराज चार वर्ष रेडियो नाटकमा मात्र सीमित रहे। त्यसपछि दीपाश्रीले देवीलगायतको सिरियलमा अभिनय गर्न थालिन्। दीपकराज पनि ट्वाक्क टुक्क, काउकुती, तैं चुप मै चुपलगायतका सिरियलमा अभिनय गर्न थाले।
दीपाश्री दीपकराजलाई स–सानो कुरामा केयर गर्छिन्। दीपकराजले पनि उसरी नै केयर गर्छन्। हिजोआज त पशुपतिको डाँडामा ध्यान गर्न पनि एकाबिहानै सँगै पुग्छन्। उनीहरूको मित्रताको डोरी निकै बलियोसँग गाँसिएको छ। कतिवेला को कहाँ छन् भनेर अपडेट भइ नै रहेका हुन्छन् उनीहरू। यति लामो समयसम्म सम्बन्ध टिकिराख्नुको कारण बताउँछन् दीपकराज, ‘एक त हामी लेडिज जेन्स भएकाले प्रगतिप्रति कसैको ईष्र्या हुँदैन। अर्को कुरा हामीमा पारदर्शिता छ।’ उनीहरू एक अर्कालाई निकै माया गर्छन्।
दीपाश्री भन्छिन्, ‘हामीले बिहे गर्न माया गरेको हौइनौँ। तर, म उसलाई गहिरो माया गर्छु। दुःख नपाओस् भन्ने लाग्छ। सहयोग गरिरहुँजस्तो लाग्छ। मैले भन्दा अझ बढी उसले माया गर्छ।’ दीपकराजलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। साँच्चिकै भन्दा उनीहरू ‘डिप लभ’मा छन्। एकअर्कालाई भित्रैदेखि माया गर्छन्।
अब दीपाश्री बिहे नगर्ने मुडमा पुगिसकेकी छन्। अब कसैको पर्फेक्ट श्रीमती बनेर बस्न सक्दिनँ झैँ लाग्छ दीपाश्रीलाई। अब दीपाश्रीको शब्दकोषमा बिहे भन्ने शब्द नै छैन रे ! ‘मलाई जीवनमा दीपकबाहेकको अर्को व्यक्तिले आकर्षित नै गरेन,’ उनी भन्छिन्। तर, दीपकराजको तर्क अर्कै छ। भन्छन्, ‘मेरोभन्दा करिअरको बढी माया गर्छिन् उनी।’ Loading...
गिरान्चौर पुगेर भारतीय कलाकार राजपाल यादवले भने ‘आज म स्वर्गमा पुगेको अनभुती गर्दैछु’
काठमाडौँ । भारतीय चर्चित अभिनेता राजपाल यादव चलचित्र छायांकनका क्रममा यतिबेला नेपालमा छन् ।
बलिउडका चर्चित कमेडी कलाकार राजपाल यादब करोडपति बन्न काठमाडौंमा, के बन्लान राजपाल करोडपति?
काठमाडौं । बलिउडका चर्चित हाँस्य कलाकार राजपाल यादव ‘करोडपति’ नामक नेपाली फिल्म खेल्न काठमाडौं आइपुग...
हलिउडकी चर्चित पप गायिका माइली साइरस को बिबाह नेपालमा !
१८ फागुन, एजेन्सी । पप गायिका माइली साइरस र अभिनेता लायम हेम्सवर्थको आफ्नो विवाह नेपालमा हुने भएको छ...
यी चर्चित बलिउड नायिकाहरु जसले फिल्मी दुनियामा ‘रि-इन्ट्री” गर्न आफ्नो स्तन सर्जरी गराए(हेर्नुहोस पहिले र अहिलेको फोटो सहित)
सलमान खानको फिल्म ‘वान्टेड’मा अभिनय गरेकी नायिका आयशा टाकिया बलिउडबाट गायव छिन्। विवाह गरि छोराको आम...
भारत कै चर्चित अवार्ड वितरण कार्यक्रममा नायिका सोनाम कपुरले भित्रि बस्त्र नलगाए पछी यस्तो बेइज्जत(हेर्नुहोस भिडियो)
आफूलाई सुपर हिट बनाउनका लागि ग्ल्यामरको दुनियामा अगाडि बढ्न खोजिरहेका हुन्छन् । नयाँ–नयाँ पहिरन लगाय...
१७ बर्षकै उमेरमा आमा संगै बोल्डसिन दिने नेपाली सन्नी लियोन भन्दै भारतमा अर्चनाको फोटो भाइरल, रेट तोकियो साँढे चार करोड(भिडियो सहित)
न्युड फोटो' विवादमा तानिएका अचर्ना पनेरुले नेपाली चलचित्र खेलिसेकी छिन् ।
पोर्न उद्योगमा जान चाहेको...